Dagaal Khasaaro geystay ayaa xalay Shabaab iyo ciidamada Dowladda Federalka Somaliya ku dhexmaray gedo – STAR FM SOMALIA
Dagaal Khasaaro geystay ayaa xalay Shabaab iyo ciidamada Dowladda Federalka Somaliya, waxa uu ku dhexmaray deegaanka Gariley ee Gobolka Gedo ka tirsan, kadib markii Xoogaga Shabaab ay weerar ku soo qaadeen deegaankaasi.
Dadka deegaanka ayaa sheegaya Shabaabka inay si gaadmo ah u soo beegsadeen ciidamada Dowladda, waxaana dagaal dhexmaray labadaasi dhinac ka dhashay Khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh.
Ugu yaraan Shan ruux ayaa ku dhintay dagaalkaasi, halka dhaawacana uu gaarayo 10 ruux oo dhinacyada dagaalamay ah, sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen.
Ciidamada Dowladda oo aanan sidaasi u badneyn ayaa isaga cararay deegaanka Gariley, waxaana gacan ku haynta deegaanka la wareegay ciidamada Ururka Shabaab.
Dadka deegaanka waxa ay sheegayaan inay qabaan walaac la xiriira in ciidamada Dowladda ay mar kale dagaalka dib u soo qaadaan, islamarkaana Khasaaro ka dhasho dagaalka oo shacabka uu soo gaaro.
Dhinaca kale Al-shabaab ayaa la sheegayaa in ay howlgallo ka billaabeen deegaankan ay qabsadeen, sidoo kalena waxaa la tilmaamay in ay dhowr fariisin ka sameysteen halkaasi.
Deegaanka Garilley ayaa ku yaalla gobalka Gedo, gaar ahaan waxa uu xigaa dhanka xuduudka Kenya, waxaana halkaasi ku sugnaa ciidamada dowladda Soomaaliya.